Kunzima kunina wendodakazi 'ebulawe yisoka' - Ilanga News
Home Izindaba Kunzima kunina wendodakazi ‘ebulawe yisoka’
Kunzima kunina wendodakazi ‘ebulawe yisoka’
Uthi kasidluli isithombe sesidumbu somntanakhe
UNKz Nokulunga Nxumalo (17) okuthiwa ushaywe wabulawa yisoka lakhe abehlala nalo kubo
KUNZIMA ukuvala amehlo kunina wowesifazane okusolwa ukuthi wabulawa yisoka lakhe ngoLwesithathu ebusuku KwaMsane, eMtubatuba njengoba ethi livele libuye linjengoba linjalo inxeba alibona esidunjini sayo.
UNkk Simangele Nxumalo (38) ongunina kaNkz Nokulunga Nxumalo (17), uthi yize sekuphele izinsukwana indodakazi yakhe ibulewe, kodwa kusenzima nokulala kuyena uma ecabanga isimo isidumbu sayo ebesiyiyona.
Uthi indodakazi yakhe yahlukana naye iya esokeni layo ngo-Lwesibili emini njengoba ibisichitha isikhathi esiningi nalo ngenxa yokuthi ubeyibalekisela ukuthi ivukwa njalo wukugula uma ikubo.
“Ngavuswa ngumfana wakwamakhelwane kamsolwa ngehora lesibili ekuseni, salibangisa kubo kamsolwa. Kwathi uma sifika, bangifaka ekamelweni lapho engafika isidumbu sendodakazi sisembhedeni, sigcwele igazi.
“Sasinenxeba elibi enyongeni okuthi uma ngivala amehlo yize seku-dlule izinsuku ngilibone linjengoba linjalo. Ngaleso sikhathi umsolwa wayengasabonwa nangalukhalo ukuze asichazele ukuthi kuze kube njena nje, bekwenzenjani ngoba abakubo bathi kabezwanga lutho.
“Bathi nabo bavuswe nguyena umsolwa owangena nezicabha ethi mabaphuthume kade exabana noNokulunga, wamshaya ngenduku waquleka, usazovuka,” kusho uNkk Nxumalo.
Uthi kwathi uma umndeni utshela umsolwa ukuthi uNokulunga ushonile, wavele wabaleka.
“Ungizwise ubuhlungu obumangalisayo, kangazi ukuthi uma ngingambona ngingambhekelwa ngubani.
“Lo mntwana wami ngimkhulise kanzima ngemali engiyithola ngokuluka amacansi, uyise engekho njengoba sewashona. Uma ngiphuma ukuyosika incema, bengibuya esehlanze indlu, wapheka, wageza nezingane zakwabo.
“Bengimvumela ukuba avakashe esokeni lakhe ngoba nami ngibona ukuthi ukugula obekumphatha kumvuka kakhulu uma elapha ekhaya.
“Ubevele athi kukhona into enyukayo imvale umoya maqede ophe kakhulu ngezansi, kodwa uma engekho lapha egcekeni bekungamvuki. Isikole ubeseze wasiyeka ngenxa yakho ukungaphili,” kusho uNkk Nxumalo.
UNkz Mahloni Zungu ongudadewabo kamsolwa, uthi besekunesikhathi umufi ehlala nomfowabo ngoba bebethandana. Uthi umfowabo akasebenzi, bonke bebedla ukudla okuthengwa nguninakhulu ngemali yempesheni.
“Ngosuku lwesigameko sivuswe nguye umsolwa ethi bebexabana nomufi wamshaya, manje uqulekile. Umama wafika endlini yabo esevele eseshonile.
“Umsolwa wayengaboni ukuthi useshonile ngoba kwathi umama eqeda ukusho ukuthi akasekho, wasangana, wahayiza kakhulu wagcwala lonke igceke kuhle komuntu wesifazane.
“Kasikwazanga nokumbuza ukuthi umshaye ngani ngoba wayehayiza ngendlela engalawuleki maqede wabaleka. Wabanjwa ngamaphoyisa ngakusasa waboshwa,” kusho uNkz Zungu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuboshwe umsolwa oneminyaka ewu-23 mayelana naleli cala, uzovela eNkantolo yeMantshi yaKwa-Msane namuhla ngoMsombuluko.
Previous articleUmvangeli uboliswe ngenduku esolwa ngokweba inkomo
Next articleOKlebe ‘bambe amathuna’ befuna izibhamu